बाम एकतामा अल्झनः कहाँ अड्कियो हलो ? – Halkaro
बाम एकतामा अल्झनः कहाँ अड्कियो हलो ?
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि एमाले र माओवादीले निर्वाचन सकिएलगत्तै पार्टी एकता हुने दाबी गर्दै आएका थिए । तर चुनाव सकिएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि दुई दलको एकता प्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवार र प्रादेशिक सरकारको स्वरूपसम्बन्धी पद बाँडफाँटको सूत्र तयार गरेका छन् । तर दुई पार्टीेको केन्द्रीय तहमा हुने एकताको भने प्रारम्भिक खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन ।
एकताको सुस्ततामा पदीय लेनदेन र सैद्धान्तिक विषयले अल्झन थपेको छ । एकतापछि पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्नेमै समझदारी बन्न सकेको छैन । दुवै दलका नेता ‘एकता हुन्छ’ भन्नेबाहेक थप प्रगति सुनाउन असमर्थ देखिएका छन् ।
‘दुइटा ठूला पार्टीहरू जो वैचारिक र सांगठनिक रूपमा पनि फरक ढंगले बनेका छन्, तिनलाई मिलाउने काम सजिलो छैन, त्यसैले अहिले वैचारिक राजनीतिक विषयहरूमा सहमति जुटाउने काम भइरहेको छ,’ वाम एकता संयोजन समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अन्य कुनै कारणले ढिलो भएको होइन ।’
ठूलो पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्रीसहित पार्टी अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हुनुपर्ने दबाब एमालेभित्र छ । माओवादीमा पनि एकतामा जाने भएकाले सम्मानजनक अवस्थाका लागि अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने गरी वार्ता गर्नुपर्ने लबिइङ तीव्र छ । यही कारण ओली तत्काल पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष पद दिन तयार छैनन् भने दाहाल पनि अध्यक्ष पद छाडेर एकतामा जान हौसिएका छैनन् ।
त्यस्तै, युद्धको पृष्ठभूमि भएकाले दाहालसँग कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि जोडिएका छन् । जसलाई मानव अधिकार दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फरक ढंगले हेर्ने गरेको छ । एमालेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा जुन छवि छ, दाहाल अध्यक्ष बनेपछि पार्टीको त्यो छविमा दाग लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एकथरी एमालेहरूको छ ।
चुनावपछि माओवादीले हासिल गरेको जितको परिणाम चुनावअघिको दुई दलले आकलन गरेभन्दा फरक ढंगले आएको छ । चुनावअघि ४० प्रतिशतको हिस्सेदार बनाइएको माओवादी चुनावी परिणामले ३० प्रतिशतको हैसियतमा आएको छ ।
त्यसैले विगतमा आकलन गरेभन्दा चुनावी परिणामले माओवादीको हैसियत खुम्चिएकाले एकीकृत पार्टीको एकलौटी नेतृत्व दाहाललाई दिइहाल्न नहुने धारणा एमाले नेताहरूको छ । त्यसैले उनीहरू हतारोमा एकता प्रक्रियामा गएर माओवादीलाई अध्यक्ष सुम्पिइहाल्न तयार छैनन् ।
यद्यपि पदकै विषयले मात्र एकता प्रक्रिया लम्बिइरहेको भन्नेमा नेताहरू सहमत छैनन् । किनभने दुवै दल अब एकता प्रक्रियाबाट भाग्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले कुनै न कुनै विधिमा पुगेर पदीय व्यवस्थापन हुने उनीहरूको जिकिर छ ।
‘पदकै कारण सबै रोकिएको छ भन्ने होइन, वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा राम्ररी नमिलीकन एकता भयो भने एउटा पंक्ति निष्क्रिय बन्ने अवस्था हुन्छ,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सबैलाई चलायमान हुने ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
दुवै अध्यक्षले एकअर्काको योगदान राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अब पदकै कारण फरक कित्तामा लाग्ने अवस्था नआउने एमाले उपमहासचिव पौडेलको पनि भनाइ छ ।
‘दुवै दल लामो प्रक्रिया पार गरेर यो विन्दुमा आइसकेका छन्, अब फर्किने अवस्थामा छैनन्,’ उपमहासचिव पौडेलले भने, ‘त्यसैले अध्यक्षहरूको व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन, मूल कुरा पार्टी व्यवस्थापन र नीति व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ ।’
दुवै दलबीच एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा यसभित्र खेल्नेहरूलाई लागि भने उर्बर जमिन तयार भइरहेको छ । यसको संकेत माओवादी अध्यक्ष दाहालले दुई दिनअघि आफ्नै पार्टीका विद्यार्थी नेताहरूसँगको भेटमा गरिसकेका छन् ।
निवासमा भेट्न आएका विद्यार्थी नेतालाई दाहालले पार्टी एकताका विभिन्न पक्षमाथि ब्रिफिङ गर्दै भनेका छन्, ‘एकता हुन नदिन देशी–विदेशी तत्त्वहरू केपी ओली र मेरापछि लागिरहेका छन् तर हामी यसलाई सफल हुन नदिने गरी अघि बढेका छौं ।’
दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया अहिले अध्यक्ष पदको अलावा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्थापन पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन थालेको छ । गत शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दलका अध्यक्षलाई दिएको दिवाभोज र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको बालकोट दौडाहाले पनि यी दुई पद पनि अब एकता मुद्दासँग जोडिएको पुष्टि गरेको छ ।
अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ व्यक्ति ल्याउने वा नयाँ ल्याउँदा क–कसले बाँडफाँट गर्ने भन्ने पनि एकताको पदीय लेनदेनमा जोडिँदा अल्झन अझै थपिएको छ ।
← कृषि बैंकको पाँच करोड घोटालाकी मुख्य अभियुक्त जेल चलान
कमाउ अड्डाका कर्मचारी सरूवा रोक्न दौडधुपमा →